MR MRT: ငယ်စဉ်အခါ . . . (Dec 15, 2016)
ငယ်စဉ်အခါ . . . (Dec 15, 2016)
"နပသ ပုလဲရတုတုန်းက ဦးဇင်း တင်သွင်းတဲ့ စာတမ်းကို ဖတ်ပြီးပြီ။"
"နည်းနည်းတော့ ပြောစရာ ရှိတယ် ဘုရား။"
"ငယ် လတ်ကြီးမှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်သင့်တယ်လို့ ပြောတယ် မဟုတ်လား။"
"ဟုတ်တယ်လေ။ ဗမာစကား ရှင်းနေတာပဲ။"
"သာသနာ ပျက်မှာ စိုးရိမ်မိလို့ပါ ဘုရား။"
"ဘုရား ဘုရား . . .။ ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲ။"
"တပည့်တော်ပြောတာ လောသွားလို့ ဘုရား။ စာပေပရိယတ် မလိုက်စားကြတော့မှာ စိုးတာ ဘုရား။"
"မဆိုင်ပါဘူး။ လိုက်စားကြမှာပါ။ ပရိယတ် မပါလို့မှ မဖြစ်တာ။"
"တပည့်တော် မြင်တာ ပြောရရင် . . . ပရိယတ်ပဲ အားထုတ်စေချင်တာ။ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရင်လည်း . . . ဟိုဆရာတော်ကြီး . . . ပြောခါနီးမှ ဘွဲ့တော် မေ့နေတယ်။ ဆရာတော်ကြီးဆိုရင် ဓမ္မာစရိယပြီးမှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တာတဲ့။"
"သိပြီ။ ထားပါတော့။ အဲ့ဒီ ဆရာတော်ကြီးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုန်းကြီး တော်တော်များများ အသက်ကြီးမှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြတာ။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ငယ်ငယ်ကတည်းကသင်တဲ့ လူတွေလောက် မတတ်တာပေါ့။"
"ကဲပါ။ မငြင်းတော့ပါဘူး။ ပရိယတ္တိ တတ်ရမယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရုံနဲ့ ပရိယတ္တိ အားနည်းတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဆရာတော်ကြီးလို ဓမ္မာစရိယပြီးမှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း သဘောမတူဘူး။ ဒါနဲ့ ဒကာကြီး အာနာပါန အားထုတ်သလား။"
"ဘယ်အရွယ်က စပြီး အားထုတ်တာလဲ။"
"စ အားထုတ်ဖူးတာကတော့ ခုနစ်တန်းတုန်းက။ ထိထိမိမိ အားထုတ်ဖြစ်တာကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး အသက် နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်ကျမှ။ ဒီနေ့ထိပဲ။"
"ဘုရားလောင်း သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား ငယ်ငယ်က . . . လယ်ထွန်မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပချိန်မှာ . . . အာနာပါန အားထုတ်တယ်တဲ့။ ပြတ်ပြတ်သားသား အားထုတ်တာက သက်တော် နှစ်ဆယ်ကိုးနှစ်ကျမှ။ အခု ဒကာကြီးက ဘာဖြစ်လို့ အသက်နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်နဲ့ အားထုတ်တာလဲ။ ဘုရားလောင်းလို နှစ်ဆယ့်ကိုးနှစ်ကျမှ အားထုတ်ပါ့လား။"
"ဒါကတော့ မဆိုင်ဘူးလေ။ ဦးဇင်းက မဆိုင်တာတွေ လျှောက်ပြောတာပဲ။"
"နည်းနည်းတော့ ဆိုင်ပါတယ်။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားက သက်တော် နှစ်ဆယ့်ကိုးနှစ်ကျမှ တရားအားထုတ်တယ်။ ဒကာကြီးက အသက်နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်ကတည်းက အားထုတ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုပေါ့။ ဒကာကြီးပြောတဲ့ ဆရာတော်ကြီးက ဓမ္မာစရိယပြီးမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်။ ခုခေတ် ဦးဇင်းတွေကျတော့ ငယ် လတ် ကြီး ကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေါ့။ မရဘူးလား။"
"သဘောပဲ ဘုရား . . .။ သဘော သဘော။ တပည့်တော် ပြန်တော့မယ်။"
Posted by Ashin Acara. at 4:24 AM